Umthwebuli Wezithombe Imicimbi Alberto Agrusa - Balestrate - Palermo
Isazi esiphambili Kwensizakalo Yezithombe Zomshado, Ukukhangisa, Imicimbi
Alberto Agrusa, eVia F. Crispi 88 a I-Balestrate, esifundazweni Palermo, kunjalo umthwebuli wezithombe uchwepheshe okhethekile ku Umshado, Ukukhangisa, Imicimbi, imibukiso yemfashini, izithombe zesiteji sezindatshana zomdanso, ukubikwa, impilo namanje, izingoma nezincwadi zezithombe zamamodeli.
Umthwebuli zithombe u-Alberto Agrusa Balestrate Palermo - Simihuzuko Umshado, Ukukhangisa, Imicimbi
Alberto Agrusa, a I-Balestrate, esifundazweni Palermo, kunjalo umthwebuli wezithombe ochwepheshe abenzelwe izinsiza ze Umshado, Ukukhangisa, Imicimbi, imibukiso yemfashini. Ikusukela ngonyaka we-97 njengomhlanganyeli wesitudiyo sezithombe sikaPietro Agrusa, kusukela ngo-2009 kuqhubeke wathuthukisa futhi wenza ngcono izindlela zokuthwebula izithombe, ezimisela ngokwengeziwe njengomthwebuli wezithombe ochwepheshe I-Balestrate futhi hhayi kuphela. Ngibonga uCAmabhere wezithombe ezithuthukile ePalermofoto ePalermo nakwisithombe sezithombe uPeppe Ferreri namadodana ka-Agrigento noGela, Alberto Agrusa kwandisa ubungcweti bakhe njengoba Umthwebuli wezithombe okhethekile ku Imicimbi, umshado, ukukhangisa, izincwadi zesithombe. ke Umthwebuli zithombe u-Alberto Agrusa hUbuye walandela imihlangano yokucobelelana ngolwazi ehlukene nothisha bezingcweti zikaMirco Toffolo, uSalvatore Dimino, uSalvo noDomenico Veneziano, uGiuseppe Sinatra, uDamiano Errico, uMarco Olivotto. Uphinde waba nobungcweti bakhe ku nezinsizakalo ze Umshado, Ukukhangisa, Imicimbi, imibukiso yemfashini.
Umthwebuli Wezithombe Zomshado u-Alberto Agrusa Balestrate Palermo - Amaphrojekthi kanye Nemiklomelo
Il Umthwebuli wezithombe onguchwepheshe Alberto Agrusa, a I-Balestrate, esifundazweni Palermo, hathuthukise amaphrojekthi amaningana emkhakheni wezithombe zemfashini nobukhazikhazi futhi wasebenzisana nezinkampani ezibalulekile zasendaweni ezinjengezindawo zokudlela zakwaDa Clà kanye nePrimoPiano Spose kanye nezindawo zokudlela ezinjengokuthi kungani kungenjalo? I-Pub Balestrate, iBlanko, iSinus DiscoClub Cinisi. Ezinye izithombe ze Alberto Agrusa ashicilelwe kumamagazini endawo nasemaphephandabeni, anjengeGiornale di Sicilia, nakuzwelonke anjengeCorriere della Sera. Ngaphezu kwalokho, il umthwebuli wezithombe Alberto Agrusa huzuze umklomelo wokuqala kumncintiswano wesibili weCanon Club Italia National, ngokushicilelwa komphumela kaFebhuwari 2013 kumagazini wezithombe. Wasebenzisana nephrojekthi yaseJapan "iLens Folio" kanti enye yezithombe zakhe ishicilelwe embhalweni wamazwe jikelele wencwadi ethi "Lens Folio, isikhangiso sakho sothando lapha". UCous Cous Reporter wamenyezelwa ukuthi uzophumelela kumncintiswano weCous Cous Fest eSan Vito Lo Capo.
Umshicileli wezithombe u-Alberto Agrusa Balestrate Palermo - Ubuchwepheshe nekhono
Il Umthwebuli wezithombe onguchwepheshe Alberto Agrusa, a I-Balestrate, esifundazweni Palermo, ngokukhethekile ekubikeni kusuka Imicimbi, Umshado, Ukukhangisa, Izincwadi Izincwadi nokunye okuningi. Isipiliyoni esifakazelwe se Umthwebuli zithombe u-Alberto Agrusa yamukelwa yikharikhulamu ehlonishwa kakhulu, njengoba sesibonile. Ngoba imicimbi zazo zonke izinhlobo, njengemibukiso yemfashini, izincoko zomdanso, imidlalo yaseshashalazini nokuningi, the Umthwebuli zithombe u-Alberto Agrusa ungowokubonga ochwepheshe ofanelekile ngobuqambi nokwethembeka okumhlukanisa. Ngaphezu kwalokho, enye i-Flagship ye umthwebuli wezithombe di I-Balestrate ngokuqinisekile ihlumela lesithombe se Matrimonio: ngengqondo ungafihli umcimbi wokumisa izikhathi ezinhle kakhulu zomshado wakho ephepheni. Futhi nomkhakha we Ukukhangisa insimu lapho Umthwebuli zithombe u-Alberto Agrusa, of I-Balestrate, esifundazweni Palermo, uchwepheshe osunguliwe. Hhayi kuphela ikhompiyutha e izincwadi zesithombe, kepha nezinsizakalo ze Ukukhangisa.
Umkhangisi wezithombe u-Alberto Agrusa Balestrate Palermo - onguDubula onguchwepheshe
Lesi sithombe somshado wakho? Isibhamu Professional for Advertising? Ukubikwa Kwesehlakalo? Il umthwebuli wezithombe uchwepheshe Alberto Agrusa, a I-Balestrate, esifundazweni Palermo, ibilokhu isebenzelana nezinsizakalo zezithombe ezivezwa ngobuqambi, umsuka nokunakwa ngokweqile kwemininingwane. Usuku lwakho Matrimonio izongafi ezikhathini zayo ezinhle kakhulu ngo-a umthwebuli wezithombe uchwepheshe ozokulandela ngokunakekela nangokugcina isikhathi. Ngaphezu kwalokho, ngoba imicimbi e Ukukhangisa il Umthwebuli zithombe u-Alberto Agrusa liphakathi kochwepheshe abasungulwe kakhulu eSicily. Noma yisiphi isidingo kanye nezithonjana zezithombe ze Umshado, Ukukhangisa, Imicimbi, bathembela kuMthwebuli Wezithombe u-Alberto Agrusa, a I-Balestrate, esifundazweni sasePalermo.
Ikheli: UVia F. Crispi, oneminyaka engama-88
I-POSTAL CODE: 90041
Umakhala ekhukhwini: 327 6941318
Inombolo ye-VAT: 06293920820